Farshaxan - Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka | Cusbooneysii. Dhiirrigeli. Excel.
Dhammaan koorsooyinka farshaxanka muuqaalka ah waxay ku dadaalayaan inay kobciyaan fikirka hal-abuurka ah, hal-abuurka, xallinta dhibaatooyinka iyo inay horumariyaan xirfadaha wada-xiriirka. Koorsooyinka waxaa lagu baraa qaababka muujinta farshaxanka iyada oo loo marayo afarta qaybood ee farshaxanka muuqaalka ah:
Soosaarida Farshaxanka: Sameynta farshaxanka
Cambaareynta Farshaxanka: Sharaxaadda, lafa-guridda, tarjumaadda iyo qiimeynta farshaxanka
Taariikhda Farshaxanka: Fahamka farshaxanka ee la xiriira dhaqanka
Aesthetics: Aqoonsiga astaamaha muhiimka ah ee farshaxanka muuqaalka ah iyo ka jawaab celinta iyaga
Ardayda qaadata fasalada farshaxanka muuqaalka ah waxay fursad u leeyihiin khibradaha wax soo saarka iyaga oo adeegsanaya warbaahinta farshaxanada kala duwan. Kuwa doonaya inay xoogga saaraan farshaxan gaar ah, heerka labaad iyo seddex fasal ayaa la siiyaa. Koorsooyinka Heerka Labaad ayaa si qoto dheer u qotodheer heerarka koorsada seddexaadna waxaa loogu talagalay ardayda doonaya inay horumariyaan faylalka tacliinta sare ee kulliyadda iyo / ama ay ku sii wataan xirfadda farshaxanka muuqaalka ah. Dhammaan koorsooyinka farshaxanka ee ku yaal boggan waxay kasbadaan dhibco dhammaystirka shuruudaha qalin-jabinta buundada farshaxanka.
Dhibcaha Arts (shuruudaha qalinjabinta)
Khidmadaha Koorsada Farshaxanka
Koorsooyinka farshaxanka (PDF)
Ardaydu waxay ku buuxin karaan shuruudaha qalin jabinta dhibcaha 1.0 Arts iyada oo loo marayo fasalo kala duwan. Deyntan waxaa lagu buuxin karaa fasal kasta, markaa hubi inaad horay u fiiriso oo aad doorato koorsooyinka (sidaha) ugu habboon danahaaga.
Liiska Koorsada Dhibcaha Farshaxanka
Khidmadaha kaladuwan waxay ka mid yihiin koorsooyinka farshaxanka qaarkood. Laba toddobaad ka dib marka simistarku bilaabmo, koontada Maareynta Lacagta ee Skyward ee ilmahaaga ayaa la qiimeyn doonaa lacagta u dhiganta koorsada. Khidmadaha waxaa laga bixin karaa khadka tooska ah ee loo maro Skyward Fee Management, iyadoo la isticmaalayo koontadaada 'RevTrak'. Dheelitirka bil kasta xusuusinta la rabo waxaa lagu diraa emayl haddii aan khidmadaha si dhaqso ah loo bixin. Deeqaha ayaa loo heli karaa khidmadaha farshaxanka. Si aad u codsato deeq waxbarasho, fadlan la xiriir la-taliyaha dugsiga ee ilmahaaga.
Koorsada Waxbarashada Teknolojiyada
Taariikhda Farshaxanka AP (Tonka Online)
Koorso: # T6094F, qaybta 1, Tonka Online
Koorso: # T6096W, qaybta 2, Tonka Online
Koorsadani waxay dhammaystireysaa .5 dhanka amaahda Farshaxanka
Taariikhda Farshaxanka AP waxay u oggolaaneysaa ardayda inay baaraan noocyada waaweyn ee muujinta farshaxanka ee la xiriira dhaqamada kala duwan waqtiyo kala duwan oo kala duwan.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan AP Art History (Tonka Online)
Farshaxanka AP Studio
Koorso: # AP602, S1
Koorso: # AP603, S2
Koorsadani waxay buuxineysaa shuruudaha Farshaxanka.
Shuruudaha: Si guul leh u dhammaystiray laba ama in ka badan semestar farshaxan; Sawir gacmeedka aadka loogu taliyay
AP Studio Art waxaad ku abuureysaa faylalka loo yaqaan AP Studio Art Exam. Faylka faylalka waxaa lagu sawiri doonaa, 2D ama 3D.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan AP Studio Art
Koorso: # 6026
Ardaydu waxay baran doonaan farsamooyinka loo tuuro gawaarida iyo mashaariicda dhismaha. Ardaydu waxay abuuri doonaan farshaxan farshaxan oo shaqeynaya sida bakeeriga, dhalooyinka, fijaannada, shaaha, iwm.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan dhoobada I
Koorso: # 6028
Shuruudaha: Ceramics I darajada B- ama ka sii fiican
Ardayda Ceramics II waxay bartaan sida loo sifeeyo xirfadahooda giraangiraha iyo gacan dhisida si loo abuuro xirmooyin bakeerro iyo fijaanno ah. Farsamooyin casri ah oo casri ah ayaa la bari doonaa.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan dhoobada II
Koorso: # 6030
Shuruudaha looga baahan yahay: Dhameystirka dhoobada II oo leh B- ama ka sii wanaagsan
Koorsadani waa lagu celin karaa daraasad dheeri ah oo ogolaanshaha macallinka
Ceramics III waxaa loogu talagalay ardayga aad u dhiirrigeliya ee dhammaystiri doona cilmi-baarista shakhsi ahaaneed si loo abuuro faylalka shaqada dhammaadka koorsada.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan dhoobada III
Koorso: # 6034
Comics I, ardaydu waxay ku baran doonaan isku-darka sawirrada muuqaalka, qoraalka, iyo dhaqanka iyada oo loo marayo horumarinta astaamaha kartuun iyo abuuritaanka majaajillada.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Comics I
Koorso: # 6036
Shuruudaha looga baahan yahay: dhammaystirka Maadooyinka I ee leh B- ama ka sii fiican
Fasalkan, ardayda waxay baari doonaan wax badan oo ku saabsan kartoonada iyo naqshadeynta majaajillada sidoo kale waxay horumarin doonaan qaab shaqsiyadeed iyo bilic.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Comics II
Koorso: # 6038
Shuruudaha looga baahan yahay: Dhamaystirka Comics II oo leh B- ama ka sii wanaagsan.
Koorsada waxaa lagu celin karaa ogolaanshaha macalinka.
Comics III waxaa loogu talagalay ardayga aadka u dhiirrigeliya ee doonaya inuu horumariyo faylalka jaamacadda, u gudbiyo shaqada tartamada iyo bandhigyada, iyo / ama ku raadsado xirfad ku saabsan farshaxanka muuqaalka.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Comics III
Darkroom Sawir I
Koorso: # 6002
Ardayda waxaa loo soo bandhigi doonaa aasaaska sawir qaadashada qolka mugdiga ah iyadoo loo marayo sahaminta qoto dheer ee goobta, joojinta dhaqdhaqaaqa ficilka, muuqaalka, sawir qaadista iyo faylalka ugu dambeeya.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Darkroom Photography I
Koorso: # 6004
Shuruudaha: Dhamaystirka Sawirka I oo leh B- ama ka sii fiican
Ardaydu waxay sii wadi doonaan sahaminta sawir-qaadista qolka mugdiga ah iyagoo adeegsanaya xirfad dheeri ah iyo horumarinta faylalka.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Darkroom Photography II
Darkroom Sawir III
Koorso: # 6006
Shuruudaha looga baahan yahay: Dhamaystirka Sawirka II oo leh B- ama ka sii wanaagsan
Koorsadani waa lagu celin karaa daraasad dheeri ah oo ogolaanshaha macallinka.
Ardaydu waxay sii wadi doonaan sahaminta sawir-qaadista qolka mugdiga ah iyadoo loo marayo xirfado diiradda la saarayo, muujinta shaqsiyadeed, iyo horumarinta faylalka.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Darkroom Photography III
Sawirka Dijital ah I
Koorso: # 6040
Isticmaalka kiniiniyada sawir qaadista ee Photoshop iyo Wacom maaddaama ardaydeena warbaahintu ay baran doonaan dhowr nooc oo sawir ah. Ardaydu waxay heli doonaan kalsooni ka shaqeynta aaladda casriga ah.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Sawirka Dijital ah I
Sawirka Dijital ah II
Koorso: # 6042
Shuruudaha: Sawirka I darajada B- ama ka sii fiican
Aaladda loo yaqaan 'Digital Drawing II', ardaydu waxay diiradda saari doonaan farsamooyinka sawirrada dhijitaalka ah oo aad u horumarsan, iyagoo adeegsanaya qaab fikradeed oo ku saabsan sawirradooda iyagoo adeegsanaya mabaadi'da naqshadeynta.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Sawirka Dijital ah II
Sawirka Dijital ah III
Koorso: # 6044
Shuruudaha looga baahan yahay: Dhameystirka Sawirka II oo leh B- ama ka sii wanaagsan
Sawirka Dijital ah ee III waxaa loogu talagalay ardayda dhiirigelinta weyn leh ee abuuri doona faylalka tacliimeed. Ardaydu waxay abuuri doonaan sawir gacmeedyo shaqsiyeed oo ku saleysan cilmi baaris iyo danaha ay leeyihiin.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Sawirka Dijital ah III
Koorso: # 6052
Koorsadani waxay ardayda u soo bandhigi doontaa sawir-gacmeedka dijitaalka ah iyo khalkhalgelinta dijitaalka ah ee Adobe Photoshop iyadoo loo adeegsanayo is-muujinta farshaxanka.
Koorso: # 6054
Shuruudaha looga baahan yahay: Dhameystirka Sawirka Dijital ah ee I leh B- ama ka sii wanaagsan
Ardaydu waxay baran doonaan xirfadaha Sare ee sawir-qaadista, farsamooyinka iyo aragtida si loo xoojiyo loona ballaariyo aqoonta. Ardaydu waxay ku baraarugi doonaan qaab shaqadooda shaqsiyeed iyo qaabkooda.
Sawir Sawir Dijital ah (Tonka Online)
Koorso: # T6052, Tonka Online
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Sawirka Dijital ah (Tonka Online)
Koorso: # 6020
Sawir gacmeedka Waxaan bari doonaa ardayda xirfadaha aasaasiga ah ee sawirada si ay u abuuraan mashruucyo iyaga u gaar ah iyada oo loo marayo dhexdhexaadinno iyo halabuurro kala duwan. Fasal wanaagsan oo lagu bilaabi karo sameynta faylalka.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Sawirka I
Koorso: # 6022
In loo yaqaan 'Drawing II' ardaydu way sii kori doonaan, iyagoo sii xoojinaya xirfadahooda iyo farsamooyinka ay ku barteen Sawirka I. Xoogga ayaa la saari doonaa cilmi baarista iyo halabuurka.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Sawirka II
Koorso: # 6024
Sawirka III waxaa loogu talagalay ardayda aadka u dhiirrigelinta leh ee raadinaya inay sahamiyaan sawir qoto dheer iyada oo loo marayo mashaariic shaqsiyeed iyo inay abuuraan faylalka.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Sawirka III
Sawiridda (Tonka Online)
Koorso: # T6020, Tonka Online
Sawirka Tonka Online wuxuu ardayda bari doonaa xirfadaha aasaasiga ah ee sawirada si ay u abuuraan mashruucyo iyaga u gaar ah iyada oo loo marayo dhexdhexaadinno iyo halabuurro kala duwan. Ku habboon ardayda u baahan dabacsanaan.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Sawirka (Tonka Online)
Naqshadeynta & Naqshadeynta Alaabta
Koorso: # 6032
Shuruudaha: Midna; Sawirka Sawirka I iyo II & Intro ee Studio Art
Ardaydu waxay baran doonaan wax ku saabsan garaafka iyo qaabeynta wax soosaarka iyagoo adeegsanaya Adobe Illustrator iyo Photoshop. Codsiga dhabta ah ee adduunka ee barashada ayaa xoogga saaray.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Sawirka & Naqshadeynta Alaabta
IB Muuqaalka Farshaxanka HL
Koorsada HL: # IB602, S1 Sannadka 1
Koorsada HL: # IB603, S2 Sannadka 1
Koorsada HL: # IB604, S1 Sannadka 2
Koorsada HL: # IB605, S2 Sannadka 2
Heerarka: Koorsada amaahda 2, .5 (xilli-dugsiyeedkiiba)
Ardaydu waxay bartaan inay adeegsadaan dhowr warbaahin si ay u abuuraan faylalka tacliimeed ee gaarka ah ee ku saleysan cilmi baarista inta ay diiwaangelinayaan howshooda.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan IB Visual Arts HL
Koorsada SL: # IB600, S1
Koorsada SL: # IB601, S2
Heerarka: 1 koorso amaah ah, .5 (xilli-dugsiyeedkiiba)
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan IB Visual Arts SL
Hordhaca Studio Art
Koorso: # 6000
Shuruudaha: Aad ayaa loogu taliyay inay noqoto koorsada koowaad ee farshaxanka
Intro to Studio Arts waxay hordhac u tahay khibrado farshaxan oo kaladuwan waxaana ka mid ah waaya aragnimada sawirka, rinjiyeynta, daabacaadda, dhoobada, sawir qaadista, iyo farshaxanka.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Hordhaca Studio Art
Koorso: # 6014
Jewelry 1 waa hordhac u ah sameynta dahabka. Waxaad baran doontaa sida loo gooyo, loo qaabeeyo, looxa, iyo looxa birta ah si aad u sameysato kaatunno iyo suumanka.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Jewelry I
Koorso: # 6016
Shuruudaha looga baahan yahay: Dhamaystirka Dahabka I oo leh B- ama ka sii wanaagsan
In Jewelry II waxaad ku dhisi doontaa xirfadaha aad ku soo baratay Jewelry I. Dejinta dhagaxa iyo iibinta sare waa qaar ka mid ah mashaariicda fasalka.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Jewelry II
Koorso: # 6018
Shuruudaha looga baahan yahay: Dhamaystirka Dahabka II ee leh B- ama ka sii wanaagsan
Dahabka III waxaa loogu talagalay ardayda dhiirrigelinta sare leh ee raadinaya inay si qoto dheer u sahamiyaan dahabka iyada oo loo marayo mashaariic shaqsiyeed iyo inay abuuraan faylalka.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Jewelry III
Koorso: # 6444
Koorsadan farshaxanku waxay xoogga saari doontaa abuurista farshaxanka iyada oo la adeegsanayo tilmaamaha farsamada iyadoo la adeegsanayo birta iyo dhexdhexaadiyeyaasha kale.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan farshaxanka birta
Koorso: # 6008
Shuruudaha: Sawir gacmeedka Waxaan aad ugula taliyay
Ardayda waxaa lagu bari doonaa aasaaska rinjiyeynta iyadoo loo marayo sahaminta aaladaha, biyo-biyoodka, aragtida midabka, noocyada rinjiyeynta, iyo farsamooyinka ranjiyeynta ee kala duwan.
Akhri Waxbadan oo ku saabsan Rinjiyeynta I
Koorso: # 6010
Shuruudaha looga baahan yahay: dhammaystirka rinjiga I oo leh B- ama ka sii fiican
In Rinjiyeynta II feejignaan dheeri ah ayaa lagu dhejiyaa heer sare farsamo iyo tijaabinta farsamooyin farshaxanno kala duwan ah. Ardayda waxaa laga caawiyaa sameynta rinjiyeyn shaqsiyadeed.
Akhri Waxbadan oo ku saabsan Rinjiyeynta II
Koorso: # 6012
Shuruudaha looga baahan yahay: dhammaystirka Rinjiyeynta II oo leh B- ama ka sii wanaagsan
Rinjiyeynta III waxaa loogu talagalay ardayga farshaxanka aadka u dhiirrigelinaya ee doonaya inuu soo saaro faylalka shaqada oo ku saleysan cilmi baaris shaqsiyeed.
Akhri Waxbadan oo ku saabsan Rinjiyeynta III
Soosaarida Fiidiyowga I
Koorso: # 6046
Ardaydu waxay baran doonaan qorista, tafatirka, iyo soo saarida mashaariicda fiidiyowga ah. Mashaariicdu waxay u dhexeeyaan xayeysiin ilaa filimaan gaagaaban. Focus on Final Cut Pro X iyo sawir qaadista kamaradaha.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan soosaarka fiidiyowga I
Soosaarida Video II
Koorso: # 6048
Shuruudaha looga baahan yahay: dhammaystirka wax soo saarka fiidiyoowga aniga oo leh B- ama ka sii fiican
Ardaydu waxay ka shaqeyn doonaan mashaariicda fiidiyowga ee horumarsan. Mashruucyadu waxay u dhexeeyaan iskuday ilaa filimaan gaagaaban. Focus on Final Cut Pro X iyo helitaanka qaab shaqsiyeed.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Soosaarka Fiidiyowga II
Soosaarida Video III
Koorso: # 6050
Shuruudaha looga baahan yahay: dhammaystirka wax soo saarka fiidiyoowga II oo leh B- ama ka sii wanaagsan
Ardaydu waxay soo saari doonaan mashruucyo fiidiyoow xirfad leh. Focus on Final Cut Pro X iyo helitaanka qaab shaqsiyeed. Ardaydu waxay dhisi doonaan faylalka tacliimeed ee dhijitaalka ah.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Soosaarka Video III
Ku xir jacaylkaaga fanka mustaqbal mustaqbal adigoo qaadanaya koorso VANTAGE ah:
Naqshadeynta + Suuqgeynta - Hada Gr. 10-12!
Baro xirfadaha is-dhexgalka, garaafka iyo qaabeynta sheyga iyo sida loogu adeegsado adduunka ganacsiga. Sannadkan oo dhan, laba-deyn raadraac waxaa ka mid ah Naqshadeynta Naqshadeynta I & II (hal sumcad farshaxan) iyo Suuqgeynta I & II (hal sumcad ganacsi oo la doorto).
Ka qayb qaado adduunka sida xawliga ah isu beddelaya ee saxaafadda baahinta iyo warbaahinta soo kordhaysa, adigoo baranaya habab cusub oo aad ku soo saari karto sheekooyin adoo adeegsanaya fiidiyoow iyo cod. Sannadkan oo dhan, laba-deyn raad ah waxaa ka mid ah Soo-saarista Fiidiyowga iyo Saxafiyadda Dijital ah (hal sumcad farshaxan) iyo Cilmi-baaris Baaritaan (hal deyn oo Ingiriis ah).
Sahaminta isku-xirnaanta sayniska kombiyuutarka iyo naqshadeynta adoo abuuraya barnaamijyo moobil ah iyo naqshadeynta websaydhka loogu talagalay la-hawlgalayaasha mashruuca. Iyada oo diirada la saarayo horumarinta isdhexgalka isticmaaleyaasha iyo naqshadeynta aadanaha, waxaad baran doontaa inaad qeexdo xalka si loo wado awoodaha cusub iyo hagaajinta ganacsiga muhiimka ah. Sannadkan oo dhan, laba-deyn raadraac waxaa ka mid ah Mabaadi'da Sayniska Sayniska Kombiyuutarka ee AP (hal sumcadda sayniska kombiyuutarka la doorto) iyo Naqshadeynta Isdhexgalka Dijital (hal deyn farshaxan).